Wiirtuu leenjii poolisootaa Sanqalleetti maaltu uumame? - BBC News Afaan Oromoo
Wiirtuu leenjii poolisootaa Sanqalleetti maaltu uumame?
25 Adooleessa 2019
Goodayyaa suuraa Baqqala Garbaa
Namoota Wiirtuu Leenjii Sanqallee Ambootti hidhamanii jiran keessaa sababa hanqina nyaataatiin namoonni miidhaman jiraachuutu himama.
Dura Ta'aa Itti-aanaa Kongirasii Federaalistii Oromoo (KFO) Obbo Baqqalaa Garbaa miseensonni isaanii hedduun hidhamuun Sanqalleefi bakkeewwan birootti geeffamanii akka jiran dubbatu.
Obbo Baqqalaan, nyaanni haala gaariin dhiyaachaafiis hin jiru jechuun komatu.
"Waggoota dhiyoo kana keessatti namoonni godinaalee murtaa'an keessatti hanga nuti beeknutti lakkoofsa hanga kana ga'uun yeroo isaan itti hidhaman ni jira jennee hin yaadnu.
Wiirtuu leenjii Sanqallee jedhamutti namoonni 5,000 ol ta'an kan hidhamanii jiran ta'uu isaati kan nuti beeknu."
Daarekterri Hospitaala Rifeeraalii Yunvarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii namoonni shan nyaata hin nyaanne jedhamuun dhibamanii gara hospitaalichaa dhufuu himan.
Namoonni shananuu yaala argachaa akka jiran himanii, isaan keessaa tokko fayyee baheera. "Namoonni kunneen yeroo dhufan ol isaan deebisiisaa akka ture hakiimarraa odeeffannoo argadheera.
Sababii nyaata addaan kutanii turaniif tarii garaachi isaanii miidhamuurraa kan ka'e dhukkuba garaachaallee kan isaanitti ta'e dhufanidha."
Akka Dr. Gonfaan jedhanitti, hospitaalli isaanii Giddu-gala leenjii poolisii Sanqallee waliin walii galteen akka hojjetan himanii, hanga ammaatti namni du'e hin jiru jedhan.
Namoonni Sanqallee keessatti hidhaman hin jiran bakka biraa malee kan jedhamu hangam dhugaadha gaaffii jedhuuf Obbo Baqqalaan, "Wanti kun dhugaa miti. Maaliifii, dhaabni kun, mootummaan kun bakkuma isa kaleessaatti deebiyaa akka jiru kan nutti agarsiisu.
"Akka mataa kiyyaatti ani bilisummaa mataa kiyyaa hin qabu"
Hidhanii hin hiine jechuun, yookaan ammoo siyaasaan qabanii hidhanii siyaasaan qabnee hiine miti hattuudha malee jechuun kaleessas jedhamaadhuma ture."
Yeroo muraasaaf rakkoo qabu mootummaan kun amanee, uummannis amanee duukaayyu bu'ee turuu kan ibsan Obbo Baqqalaan, amma yeroo ilaallu akkuma kaleessaa deebiyanii haaluun jalqabameera jedhan.
"Kanaaf, wanti akkasii kun jalqabamuun isaa baayyee nama gaddisiisa. Abdii kaleessa qabaachaa turres deebisee nu jalaa kuffisee jira.
Amanataa kaleessa ture akka deebiyee hin suphamnetti shakkii keessa nu buusee jira.
Haalli kun akka kanaan itti fufnaan ummanni qabsoo isa kaleessaatti deebi'uuf jira."
Namoota hidhuun akka deemsifamaa jiru osoodhuma quba qabnuu, namoonni yakka hojjetaniifi hin hojjetiin adda baafamanii ni lakkifamu isa jedhu yeroo hundaa walumaan akka haasa'an kaasanii, si'a takkaatti ormis itti duulee nutis walirratti duuluunis barbaachisaa miti jechuudhaan abdiin turuus himan.
''Qaamni maqaa WBOn socha'aa jiru saffisaan dhaabuu qaba''
"Waliif eeggachuun hanga adda baafatanitti yeroo kennuufiinis barbaachisaadha jechuudhaan nutis muddinee gaafannee hin beeknu.
Image copyright Bekele Gerba/Facebook
Namoonni fakkeenyaaf, Lixa Oromiyaa keessatti hidhaman Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) duraanii kanneen bosonatti hafan waliin hidhata qabu jedhamanii irra deddeebiin ni himama.
Miseensonni keessan ammoo isa kam waliin hidhata qabu jedhamanii shakkaman jettanii yaaddu? , gaaffii jedhus deebisaniiru Obbo Baqqalaan.
"Inni sun maqaadha malee namoonni hidhaman kunneen Adda Bilisummaa Oromoo ykn miseensa WBO wajjiniin hidhata qabaataniiti jennee nuti hin fudhannu," jedhan.
Kanaaf sababii yeroo dhiyeessan Obbo Baqqalaan, namoota WBO akka bosonaa galanii qabsoo karaa nagaatti dabalamanii biyya isaanii guddisan gochuudhaan akka jaarsummaatti hojjechaa turan, kanneen akka abbootii Gadaa mana hidhaa kan buufaman jiru.
Kanaaf, hidhata qabu jechuun hin danda'amu jechuun ibsaniiru.
"Kaayyoon hidhaa ammaa kanaa siyaasa ofii tolfachuu, rakkoo kanaan qabanii bor nu waliin dorgomu jedhanii yaaduudhaan humna isaanii dadhabsiisuuf paartii kana laamshessuudhaaf."
ABO: ''Waraana dhaabne malee hin hiikkachiisne''
''Gochi amma mootummaan itti jiru hojii ABO dadhabsiisuuti''
Himannaa Wiirtuu Leenjii Poolisii Sanqalleetti ta'aa jira jedhame kanaan namoonni achi keessatti to'annaa jala jiran beelarraa kan ka'e hanga lubbuun darbutti gae'eera jedhamee miidiyaalee hawwaasummaarrattillee tamsa'aa jira.
Kan mirkaneeffachuudhaaf iyyaafannaa qaama mootummaarraa taasifneen Itti Aanaa Itti-gaafatamaa Biiroo Bulchiinsaafi Nageenya Oromiyaa Kolonel Abbabbaa Garasuu kun oduu sobaati jedhan.
"Takkaa namni du'e hin jiru. Oomtuu hin jiru wanti ta'e. Namni dhukkubsachuu danda'a."
Erga BBC Afaan Oromoo irraa gara isaaniitti bilbilamee boodallee gara mooraa Sanqalleetti bilbilanii akka qulqulleeffatan himanii, namni waa ta'e hin jiru ittiin jechuu dubbatu Koloneel Abbabaa Garasuu.
Komiin mootummaan nyaata hin dhiyeessineef jedhus soba jedhan.
Sababni isaaa ammoo nyaanni dhiyaachaa waan jiruuf jedhan.
Marii paartiilee siyaasaafi dhaabbilee siviilii irraa maaltu eegama?
12 Elba 2018
30 Caamsa 2019
Namtichi qormaata irratti haadhasaa of-fakkeesse to'atame
Bilisummaa biyyaaf qabsaa’uu hanga suphee dhahuu
Naayijeeriyaan Afrikaanota garas imalaniif achumatti Viizaa kennuufi
Lammileen UK filannoo waliigalaa taasisaa jiru
Badhaafamtuun Noobeelii Nagaa himanna duguggaa sanyii irratti baname mormite
Haadhaafi abbaa ilmasaanii semisteera tokko dursuun eebbifaman
Ayyaanni Cuuphaa UNESCO irratti galmaa'e